ကလေးဒေသနှင့် ချင်းတောင်ပေါ်တွင်မိုးရက်ဆက်ရွာသွန်းနေ မှုကြောင့် တောင်ပြို လမ်းပိတ်ဆို့မှုမျ?? - Yangon Media Group
ကလေးဒေသနှင့် ချင်းတောင်ပေါ်တွင်မိုးရက်ဆက်ရွာသွန်းနေ မှုကြောင့် တောင်ပြို လမ်းပိတ်ဆို့မှုမျ??
ဖလမ်း၊ ဇွန် ၅- စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကလေးဒေသနှင့်ချင်း ပြည်နယ်တို့တွင် ဇွန်လဆန်းမှ အ စပြု၍ မိုးရက်ဆက်ရွာသွန်းနေမှု ကြောင့် ကလေး-ချင်းပြည်နယ် လမ်းဖြစ်သည့် ကလေး-သိုင်းငင်း- ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်းနှင့်ရိဒ်နယ်စပ် ကားလမ်းတို့တွင် တောင်ပြို၊ ဗွက် ထ၊ လမ်းပိတ်ဆို့မှုများဖြစ်ပွားနေ ကြောင်း သိရသည်။
“”ကားလမ်းတွေကတော့ နှစ် တိုင်းထက်ကောင်းမွန်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်တိုင်းတောင်ပြိုလမ်း ပိတ်မှုဖြစ်ပွားတတ်တဲ့နေရာတွေ ကတော့ အခုမိုးရက်ဆက်ရွာသွန်း လိုက်တော့ တောင်ပြိုလမ်းပိတ်ဆို့ မှု၊ လမ်းပျက်စီးမှုတွေကတော့ ဖြစ်ပွားမှုရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညအိပ် ရပ်နားရလောက်အောင် စောင့်ရ တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ခဏ စောင့်ရတယ်””ဟု ကလေး-ဖလမ်း ပြေးဆွဲနေသည့် ဖလမ်းသားကား သင်းမှ ယာဉ်မောင်း ဦးပေါင်က ပြောသည်။
ကလေး-ချင်းပြည်နယ်သွား ကားလမ်းများမှာ နှစ်စဉ်မိုးအဆက် မပြတ်ရွာသွန်းသည့်ကာလရောက် ပါက တောင်ပြိုဗွက်ထ၍ လမ်း ပိတ်ဆို့မှုများယာယီဖြစ်ပွားတတ် ပြီး အချို့နေရာများတွင် ဗွက်တန်း ရှည်ကြီးများဖြစ်ပေါ်နေသည့်အ တွက် ကားများရပ်တန့်ပိတ်ဆို့မှု များဖြစ်ပွားတတ်သည်။
“”ကျွန်တော်တို့ တောင်ပြိုလမ်း ပျက်စီးတဲ့နေရာတွေကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ စက်ယန္တရားကြီးတွေ နဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ မိုးရွာသွန်းမှုများလို့ တောင်ပြိုလမ်း ပိတ်ဆို့နေတာ အရေးပေါ်ကြုံတွေ့ နေတာမျိုးရှိနေရင်လည်း ကျွန်တော် တို့ နီးစပ်ရာတာဝန်ရှိလမ်းဌာန တွေကို အကြောင်းကြားလိုက်ပါ။ ချက်ချင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ် ပါတယ်””ဟု ကလေး-ဖလမ်းကား လမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် လမ်းဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးက ပြောကြားသည်။
ယခုရက်ပိုင်းမိုးရက်ဆက်ရွာ သွန်းသည့်အတွက် ကလေး-ချင်း တောင်ကားလမ်း တောင်ပြိုလမ်း ပျက်မှုတွင် ကလေး-ဖလမ်းလမ်း နှင့် ကလေး-တီးတိန်လမ်းတွင် ဟိန် ဇိန်ရွာနှင့်သိုင်းငင်းရွာအကြားတွင် လည်းကောင်း၊ ကလေး-တီးတိန် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးလမ်းတွင် မံဆောင်းတံတား အတက်လမ်းနှင့် ဟိုင်မွာလ်ရွာ- ရိဒ်အကြားတွင်လည်းကောင်း၊ ကလေး-ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်းတွင် နှစ်နေရာ၊ သုံးနေရာဝန်းကျင်လမ်း ပျက်စီးမှုများ ဗွက်ထနေမှုများရှိနေ သည့်အတွက် စောင့်ဆိုင်းသွား လာနေကြရကြောင်း သိရသည်။
ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့သစ် အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမည်ဟု ပြည်နယ်
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက် ဆက်စပ်သော ကွင်းဆက်တရာ?
မြန်မာအလုပ်သမားများ နေ့စဉ် ၇ဝဝဝ ခန့်ဖြတ်ကျော်လုပ်ကိုင်နေသည့် ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်ဂိတ်ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်နေ
ဗင်ဒီဇယ် ကျောင်းထွက်ခဲ့သော ကောလိပ်က ဒေါက်တာဘွဲ့ဖြင့် ပြန်လည် ဂုဏ်ပြု